ब्राण्ड - नेपाली बजारमा ९० हजारसम्मका हेलमेट
गान्धी परिवारभन्दा बाहिरबाट कांग्रेस नेतृत्व आउला त ? | कांग्रेसको असहमतिका बीच अर्थ विधेयक बहुमतले पारित | विश्वकप क्रिकेटमा अहिले बंगलादेशविरुद्ध बलिङ गर्दै अफगानिस्तान | नगरपालिकाको लापरवाही : करीब एक हजार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनबाट वञ्चित | शेयर बजार उकालो, कारोवारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा !
नेपाली बजारमा ९० हजारसम्मका हेलमेट
काठमाडौं । बाइक माइन्डेड प्रा.लि.ले सार्क ब्राण्डका नयाँ हेलमेट बजारमा ल्याएको छ । २०१९ मोडलका नयाँ हेलमेटको मूल्य २० हजारदेखि ९० हजारसम्म तोकिएको छ । फ्रेन्च कम्पनी सार्कका हेलमेट उच्च गुणस्तरिय, सुरक्षित र हलुका भएको कम्पनीको दाबी छ । सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरिएका सार्क हेलमेट पाँच हजार आउटलेटमार्फत संसारभर बिक्री हुँदै आइरहेका छन् । यसका सम्पूर्ण मोडल फाइनान्समार्फत खरीद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
अब नेपालमै अमेरिकन स्पोर्ट ब्राण्ड ‘च्याम्पियन’
काठमाडौं । आरपी ग्रुपले अमेरिकन स्पोर्ट ब्राण्ड च्याम्पियन नेपालमा भित्र्याएको छ । यस ब्राण्डद्वारा उत्पादित स्पोर्ट वेयरहरु विश्वभरि नै अत्यधिक रुचाइएको कम्पनीको दाबी छ । हाल यस कम्पनीले महिला, पुरुष तथा बालबालिकाका लागि हुडी, सिलिभ, ग्राफिक टिज, ज्याकेट, आउटर, पेन्ट, सर्ट, जुत्ता, ब्याज लगायतका फेसनेबल तथा स्पोर्टस वेयरहरु उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । अहिलेलाई काठमाडौंको दरबारमार्ग र ललितपुरको कुमारीपाटीमा यसको सोरुम रहने आरपी ग्रुपले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
खुल्यो डब्लु के डिजाइनको नयाँ स्टोर ललितपुरमा
ललितपुर । विश्व चर्चित अन्र्तराष्ट्रिय ब्राण्ड डब्लु के डिजाइनको दोस्रो नयाँ स्टोर ललितपुरको कुमारीपाटीमा खुलेको छ । नेपाली राट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काद्वारा एक समारोहका बीच स्टोरको उद्घाटन गरिएको छ । युवापुस्ताहरु प्रति लक्षित विभिन्न आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट तथा एसोसिरिजहरु स्टोरमा राखिएको छ भने प्रयोगकर्ताहरुको मन जित्न सफल हुने कम्पनीको दावी छ । दक्षिण पुर्वी एशिया सहित अन्य ६० भन्दा बढी मुलुकहरुमा बजार रहेको कम्पनीको नेपालको आधिकारीक बिक्रेता टेकम्याक्स इन्टरनेशनल हो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । गत शनिबार काठमाडौंको जेनेसिस क्याफेमा हार्ले डेभिडसन बाइक फेस्ट सम्पन्न भएको छ । नेपालमा हार्ले डेभिडसन बाइकको आधिकारिक बिक्रेता आईएमई अटोमोटिभ्सले आयोजना गरेको उक्त बाइक फेस्टमा अमेरिकी लिजेन्ड्री बाइक आइरन ८८३ को टेष्ट राइड गरी विभिन्न राइडरहरुले आनन्द लिएका थिए । त्यसैगरी हार्ले डेभिडसन ब्रान्डका कपडाहरु र स्पेयर पार्ट्सको बारेमा समेत जानकारी लिन सकिने व्यवस्था थियो । आईएमई ग्रुप अन्तर्गतको आईएमई अटोमोटिभ्सले सन् २०१८ को नाडा अटो शोमार्फत नेपालमा पहिलो पटक हार्ले डेभिडसनका बाइक भित्र्याएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । यूएम बाइकको आधिकारिक वितरक आईएमई अटोमोटिभ्सले नयाँ वर्ष २०७६ लाई लक्षित गरी नयाँ अफर ‘नयाँ वर्षको बहार’ सार्वजनिक गरेको छ । सो अफर अन्तर्गत यूएम बाइकको खरिदमा ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जित्न सकिने छ । सो अफर चैत २५ देखि लागु भएको छ र आगामी बैशाख मसान्तसम्म सञ्चालन हुनेछ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपालमा ड्याट्सन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्प प्रा. लि. ले नेपाली बजारमा ड्याट्सन गो गाडीको नयाँ खरिद मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । यी गाडीहरु सुनसरी जिल्लाको आधिकारीक विक्रेता ओम साई मोटो कर्प प्रा. लि. को ईटहरीले एक कार्यक्रमकाबीच आईतबारदेखि नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष अमर खड्काको हातबाट लन्चिङ गरिएको हो । ओम साई मोटो कर्प प्रा. लि. का प्रवन्ध निर्देशक पारसमणि गेलालका अनुसार गाडी रु २४.९९ लाखबाट प्रारम्भ हुनेछ । यस गाडीका विभिन्न ३ मोडेलहरु GO, GO A (O), GO T / GO T(O) नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
हेटौँडा । हेटौंडामा रु ९ अर्बको लागतमा आधुनिक प्रविधियुक्त ऋिद्धीसिद्धी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित रातोमाटेमा करीब ४२ बिघा क्षेत्रफलमा तीन जनाको संयुक्त लगानीमा दैनिक तीन हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यले सो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिएको हो । सिमेन्टको लागि चाहिने क्लिङ्करलगायतका कच्चा पदार्थसमेत आफैँ उत्पादन गरी गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको सो उद्योगले हाल क्लिङ्करलगायतका कच्चा पदार्थ खरीद गरी ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण शुरु गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक गणेशकुमार सिंहले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
भित्रियो नेपाली बजारमा बेल्ला
काठमाडौं । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय सौन्दर्य प्रसाधन निर्माता कम्पनी कोटी इङ्कको एकाई कोटी प्रोफेसनल ब्युटी नेपाल भित्रिएको छ । कम्पनीको हेयर केयर, हेयर स्टाइलिङ तथा हेयर कलर ब्रान्ड बेल्ला प्रोफेसनल्सका साथमा कोटी इङ्क नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको हो । व्यापारिक समूह विशाल ग्रुप नेपालका लागि बेल्ला प्रोफेसनल्सको वितरक साझेदार हो । विशाल ग्रुपका निर्देशक अर्पित अग्रवालका अनुसार नेपालीहरू आफ्नो केश कलर गर्न विशेष रुचाउँछन् । यसका लागि बेल्ला उपुयक्त ब्रान्ड हो ।	थप पढ्नुहोस्
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने भीमफेदी, इन्द्रसरोवर, राक्सीराङ्ग, कैलाश र मकवानपुरगढी गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिकाका विभिन्न वडामा स्थानीय कृषकले व्यावसायिक रुपमा फूलको उत्पादन शुरु गरेका छन् । ती क्षेत्रका कृषकले सयपत्री, मखमली, चमेली, गोदावरी र पारिजात नामका फूलखेती गरेका छन् । ती फूल अहिले काठमाडौँ, ललितपुर कास्की, रुपन्देही, चितवन र मकवानपुरका बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ । मकवानपुरको उत्तरी भेगमा व्यावसायिक हाल तीन हजार ७३४ हेक्टर जग्गामा कृषकले पुष्पखेती गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
यी हुन अन्तराष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागेका तर नेपालमा निर्वाध बिक्री हुने गाडी !
काठमाडौ । चारपांग्रे सवारी साधन उत्पादक जर्मन कम्पनी भक्सवागनद्वारा बिक्री गरिदै आएका गाडीले वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्ने कार्बन उत्सर्जन गरेको तथ्य भेटिएको छ। उक्त तथ्य फेला परेपछि विश्वका थुपै्र मुलुकमा त्यस्ता गाडीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकिएकको छ तर यसबारे नेपालमा भने हालसम्म सोधखोज भएको पाइएको छैन। सवारी प्रदुषण जाँच्ने यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा राखेको छैन। विषाक्त कार्बन उत्सर्जन गर्ने यस्ता साधन रहेको पाइएमा सम्बन्धित कम्पनीमा फिर्ता पठाउने नपठाउने भन्नेबारे नेपाल सरकारले नै सोच बनाएको छैन ।	थप पढ्नुहोस्
चीनको सिचुआनमा भूकम्प, १९ जना ...
गान्धी परिवारभन्दा बाहिरबाट ...
राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको ...